OKUSHA KANYE OKUSHA maphakathi neZaragoza
Ifulethi elihle nelinelanga enkabeni ye-Zaragoza, imizuzu emi-5 uhamba ngezinyawo usuka e-Plaza del Pilar kanye no-3 usuka e-Plaza España. Ilungele ukukhululwa futhi ithule ukuze iphumule ngemva kosuku lokuvakasha noma umsebenzi edolobheni.
Ifulethi linomhlobiso omuhle nofudumele, line-air conditioning kanye ne-heater ngaphezu kwe-kitchenware edingekayo kanye nemishini ukuze ukuhlala isikhathi eside kukhululekile kusivakashi. Iphinde ithokozele ithala elithule ukuze izisebenzisele yona.
4.95 ·40 okushiwo abanye
I-Apartment imaphakathi nedolobha, eduze kwePalacio de los Condes de Morata, etholakala kumfuziselo weCalle del Coso. Ngaphandle komzamo noma izinto zokuhamba ungavakashela i-El Pilar, i-Central Market elungisiwe kanye nezikhumbuzo ezinhle kakhulu, iminyuziyamu nezitolo edolobheni.
Ngiyatholakala ukuze ngixazulule ukungabaza nezinkinga futhi nginikeze ulwazi, izivakashi zizoba nenombolo yami yocingo yazo
Inombolo yepholisi: VU-ZARAGOZA-011-20